आज विशाल–कुमार स्मृती दिवसः यसरी खिचिएको थियो मोहन चन्द्र गौतमको त्यो तस्वीर... - Jhilko
आज विशाल–कुमार स्मृती दिवसः यसरी खिचिएको थियो मोहन चन्द्र गौतमको त्यो तस्वीर...
६ भदौ,२०७६ 753 0
काठमाडौं, २० भदौ । आज विशाल–कुमार स्मृती दिवस । विशाल अर्थात, शेरमान कुँवर र कुमार अर्थात, मोहन चन्द्र गौतम । परिवर्तनको खातिर देशमा भएको १० वर्षै जनयुद्धमा हजारौँ नेपाली आमाका सपुतहरुले निस्वार्थ भाग लिए र ज्यानको आहूती गरे । तिनै महान् योद्धाहरुमध्ये वैचारिक शतिसालका बृक्ष थिए मोहन चन्द्र गौतम र शेरमान कुँवर ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीका केन्द्रय सदस्य शेरमान कुँवर ‘विशाल’ र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मोहनचन्द्र गौतम ‘कुमार’ ले परिवर्तनको लागि भएको जनयुद्धमा सहादत प्राप्त गरेको दिन हो २०६१ भदौ २० गते ।
विशाल र कुमार माओवादी जनयुद्धताका सिन्धुलीका प्रभावशाली नेता तथा फौजी कमाण्डरका रुपमा स्थापित थिए । सिन्धुलीको मरिण निवासी कुँवर र अमलेका बासिन्दा गौतमलाई तत्कालिन सरकारी सुरक्षाफौजले धनुषाको धनछवारमा कारयतापूर्ण हत्या गरेको थियो ।
विशाल–कुमार स्मृति प्रष्ठिान, सिन्धुलीको आयोजनामा आज सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा विशाल–कुमार स्मृतिसभा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउँदै छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व कृषिमन्त्री, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र न २ का सांसद हरिबोल गजुरेलले विशाल र कुमारप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
गत वर्ष मरिण गाउँपालिकाले वडा नं ७ स्थित बाह्रविसेमा शहीद विशाल–कुमार स्मृति प्रतिष्ठानको भवन र पार्क निर्माण गर्ने जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सो पार्क निर्माण कार्यको गत वर्ष सिलान्यास गरेका थिए ।
विशाल–कुमारलाई २०६१ सालमा रोल्पाको थवाङमा भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट कार्यक्षेत्र फर्किदै गर्दा धनुषाको धनछवारमा नेपाली सेनाले घर घेरा हालेर अत्मसमर्पण गर्न भनेपछि उनीहरुले बरु आफुहरु हाँसी हाँसी मर्न तयार रहेको तर कायतापूर्ण तरिकाले शरणमा नपर्ने भनेपछि शारीरिक यातना दिएर बर्बरतापूर्ण हत्या गरेको थियो ।
त्यतिबेला मोहन चन्द्र गौतमलाई तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीले सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो भने शेरमान कुँवरलाई सेनाको पूर्बि कमाण्डको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो ।
तर गणतन्त्र आएपछि तिनै हत्याराहरु, बेपात्ता र घाईते पार्नेहरु ठाडो शीर गरेर खुलेआम हिँडिरहेका छन् । उनीहरुको पद बढुवा भएको छ तर शहीद परिवारलाई भने हरेक वर्षका यस्ता स्मृती दिवसले मुटुमा सियो बनेर खेप्ने गरेको छ । सबै शहीद परिवारहरुले अझै पनि परिवर्तको अनुभूति गर्न पाएका छैनन । पाहुँचवालाहरुले शहीद परिवारको भाग खोसिरहेका छन् ।
शहीदका परिवारहरु धरधरी रोएरै बसेका छन् । अधिकाँश शहीद परिवारहरु खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगार गर्न बाध्य छन्, केही आफ्नो बल, बुँता र बुद्धिले युरोप अमेरिकामा पनि पुगेका होलान् । तर जनयुद्धकै पार्टी र नेतृत्व भित्र फस्टाउँदै र मौलाउँदै गएको नातावाद र कृपावादलाई सायद शहीदका आत्माहरुले धारे हात लगाउँदै कहीँ कतैबाट चिहाउँदै होलान् !
उतिबेला जनयुद्धको महासमरमा हिँडेका योद्धाहरुको तस्वीर पनि दुर्लभ रुपमा पाइन्थ्यो । फोटो खिचाउने फुर्सद नेता र नेतृत्वलाई कहाँ थियोर? शहीद मोहन चन्द्र गौतमका तस्वीर पनि निकै दुर्लभ थिए । सिन्धुलीको अमलेस्थित घरमा भएका सम्पूर्ण लत्ता कपडा, कागजपत्र, घर, गोठ, परिवार सबैलाई सत्ताधारी काँग्रेसले राजाको आडमा सेना र प्रहरी लगाएर ध्वस्त र तितर बितर बनाएको थियो । मान्छे मात्र नभएर पुश पंक्षिमासमेत सेना, प्रहरीले रिस फेरेका थिए । कुखुरा, खसी, बाख्रा, पाठा सबै लुटि लगेका थिए । अमलेमा प्रहरीको मैमत्ता तण्डव नृत्य चलेको थियो ।
अहिले नेकपाले जतिसुकै ठाउँमा शहीद मोहन चन्द्रका तस्वीरहरु राखेको छ ती सबैको श्रेय युद्ध पत्रकार मनऋषी धिताललाई जान्छ । शहीद गौतमको मकैका बोटको छेउमा खिचिएको त्यो तस्वीर नै सर्वत्र प्रयोग भैरहेको छ । हाल अष्ट्रेलियामा रहेका युद्ध पत्रकार धिताल भन्छन्, ‘उहाँहरु थवाङ बैठक सेकर फर्किदै हुनुहुन्थ्यो, पूर्वी कमाण्डको टिमलाई थवाङको झोलुङ्गे पुल पारी पुगेर मैंले बिदा गरें । बिदाईमा पख्नुस् एउटा फोटो लिउँ भोलि को कहाँ होला भनेर भनेँ, कुमार र अरु सबै कमरेडहरुको फोटो लिएँ । अहिले सबै ठाउँमा राखिने कुमारको फोटो त्यही हो ।’
सुनको भाउ १४ सय रुपैयाँ घट्यो, तोलाको ७२ हजार मात्र
७३ बर्षको उमेरमा जुम्ल्याहा बच्चा !
भक्तपुरको त्रिवेणीधाममा माधवनारायण मेला शुरु
६ पुष,२०७६040
नेपाल संवत्को आठौँ शताब्दीदेखि शुरु भएका एक महिने माधवनारायण व्रत एवं मेला आजदेखि...
छुरा प्रहार गरी एकको हत्या
२ भदौ,२०७६0223
तारापट्टि बजारबाट घर फर्किदै गरेको बेला कचुरी नजिकै मोटरसाईकलमा आएका अज्ञात समुहले...
५ भदौ,२०७६0121
गए राति परेको भारी वर्षाका कारण गएको पहिरोले तीन गाउँका बस्ती जोखिममा परेको वडाध्यक्ष...
बिरामी अस्पतालमै छाडेर भाग्छन् कुरुवा
१ फाल्गुन,२०७५0396